अचम्मको देश ! - Nepaliraibar
प्रकाशित मितिः २०७८ जेष्ठ १३, बिहीबार
मेरो गाउँको एउटा दाइले भन्नुहुन्थ्यो । नेपालको डाटा र पुलिसको भाटाको विश्वास हुँदैन । कहाँ कसरी लाग्छ पत्तै हुँदैन । आजकल हो रहेछ जस्तो पो लाग्दैछ । सबै नम्बर केलाउँदा–केलाउँदै आफ्नै उमेरको नम्बर बढेर जीवनले डाँडा काट्न लागिसक्यो, तै पनि के भइरहेको छ ? बुझ्न गाह्रो छ । त्यसैले हामी यो दम्भले भरिएको अचम्मको देशमा बस्छौं भन्दा अत्युक्ति नहोला । जहाँ सत्य सुन्दर छैन, सत्ता कुरूप छ । लोकान्तरबाट साभार
अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक तत्काल नहट्ने, कतार र चीनमा साताको एउटा नियमित उडान